Ukuqonda imfundo yengane ngombono ongokomoya - Afrikhepri Fondation
UMsombuluko, Agasti 10, 2020
Ukuqonda imfundo yengane ngombono ongokomoya
I-50 min ifundwe
Ukuphila kwanamuhla kunikeza izinkinga eziningi okhokho bethu bacabanga ukuthi zixazululwe. Uyinikeza i-ajenda yezimangalo ezingenakubalwa. Yeka ukuqhuma kwemibuto ehlukahlukene endaweni yonke okwamanje: umbuzo womphakathi, ubufazi, imibuzo yemfundo nokufundisa, imibuzo yomthetho, inhlanzeko, njll. Izindlela ezihlukahlukene kunazo zonke zisetshenziselwa ukwahlukanisa. Inombolo engenamkhawulo kulabo abahlinzeka nganoma yimaphi amafomu, bevela ukuxazulula umbuzo onjalo, noma ukufaka okungenani isisombululo. Yonke imibala yokufutheka kwabantu iphendulana: ama-radicals, anezinyathelo zokuguqula; abalinganiselwe, abahlonipha umyalelo osungulwe, abafisa ukuwuvuselela ngokuziphendukela kwemvelo; kanye nabalondolozi bemvelo, bashukunyiswa ukuhlaselwa okuncane kakhulu kwezikhungo kanye namasiko. Emaceleni amaphuzu avelele emibonweni yinani elingapheli lezinkolelo eziphakathi.
Ngokunikeza ezinye ukuqonda luhlolo wokuphila, singakwazi, phambi imihlola efanayo, ukucindezela nomuzwa: umuntu owayephila akusho, ezimweni eziningi, nemithombo eyanele ukuze afeze umsebenzi walo. Imizamo igcwele ukuthi ngubani ongathanda ukuguqula impilo ngaphandle kolwazi lwangempela lwezimiso zalo. Kodwa labo abahlela ikusasa akufanele nomkhawulo esifundweni sawo ebusweni ukuphila. Kuzodingeka bahlole izindawo ezijulile.
Ukuphila komuntu kufana nesitshalo esiqukethe hhayi kuphela lokho esikunikezela emehlweni ethu, kodwa futhi nesimo esizayo esikufihla ekujuleni kobukhona bayo. Ukucatshangelwa kwesitshalo, eveza amaqabunga ayo okuqala, kumemezela ukuhluma kwezimbali nezithelo. Futhi kulezi zimbali nezithelo, lesi sitshalo sesivele sinamagciwane. Kodwa kungabonwa kanjani, kuncishiswe ukuba kube yinto eyodwa kuphela yesitshalo, kunqume isimo sekusasa lalezi zitho? Ukutadisha uhlobo lwesitshalo yisimo esibalulekile salolu uphenyo.
Ngendlela efanayo, impilo yomuntu ifihla imbewu yekusasa layo. Kodwa kuphela ulwazi lwemvelo efihlekile yomuntu kwenza kube lula ukukhulelwa lekusasa. Kuyiqiniso ukuthi lolu hlobo locwaningo luyancenga kancane kubantu bethu. Bambelela phezulu bese bakholelwa ukuthi balahlekelwa ukuhamba ngezinyawo ngokungena ezindaweni ezingafinyeleleki ekubonweni kwangaphandle. Eqinisweni, ukubhekwa kwesitshalo akulula kakhulu. Umuntu uyazi ukuthi izitshalo ezinjalo ziye zavame ukuthela izithelo. Kodwa ukuphila komuntu kuyiqiniso eliyingqayizivele. Izimbali ezizokhanyisa ikusasa lakhe azikaze zivele. Kodwa kule ndoda lezi zimbali zisegermini, njengalezi zitshalo esiteji seqabunga. Kodwa nokho lekusasa liyabonakala lapho, ngaphandle kokuhlala phezulu, singene emigqeni ejulile yobuntu. Imishanguzo eminingi yokulungisa izinto ezithintekayo esikhathini sethu ayikwazi ukuphumelela ngaphandle kokuba ivela kolwazi oluphelele ekujuleni kokuphila komuntu.
Umsebenzi wezesayensi engokomoya ukusinika umklamo weNdalo ehlanganisa futhi ifinyelele kuzo zonke izingxenye zokuphila komuntu. Akunandaba ukuthi zonke izinhlelo, ezithi namuhla, zinelungelo lokufaka indima enjalo. Lona yilokho okuyisisekelo sosayensi engokomoya nalokho okungaba khona, uma kusabela kulokhu okusemqoka. Ngeke kube yinkimbinkimbi ephikisayo ehlinzekela ukuqhutshwa kobuhlakani, noma isisetshenziswa sokuthuthuka kobugovu ekusebenzeni kwalabo abafisa, ngokwabo, izinga eliphakeme lokuthuthukiswa. Uyakwazi ukusebenzisana nezinkinga ezinkulu kakhulu zesintu sangaleso sikhathi lapho kufika insindiso yakhe.
Isayensi ngokomoya ngokusobala iyaziveza ekuhlaselweni okuningi futhi ifaka izinsolo eziningi ekuzinikeleni ngokwawo umsebenzi. Lokhu kungathembeki kuyothathwa yibo bobabili abahlukumezayo, abalinganiselwe kanye nabokuzigcina bezinhlobo zonke, ngoba akakwazi ukwanelisa noma yiliphi iqembu, ukucabanga kwalo kufinyelele ngaphezu kwanoma yikuphi umoya weqembu.
Ngempela, ukucabanga kwakhe, kuphela, izimpande zabo olwazini lweqiniso lokuphila. Futhi owazi ukuphila uzovumela umgomo wakhe uqondise kuphela impilo ngokwayo. Ngeke aqoqe izinhlelo ezingaqondakali. Uyazi ukuthi imithetho eyisisekelo yokuphila izohlala esikhathini esizayo njengalapho namhlanje. Ngakho-ke isayensi engokomoya iyohlonipha ngempela ukuhleleka kwezinto. Kungakhathaliseki ukungafinyeleli kwezimo zamanje, ngeke kuphumelele ukubona imbewu yesikhathi esizayo. Kodwa uyazi nokuthi kuzo zonke izinto ukukhula nokuthuthukiswa. Ngakho uzobona, njengamanje, imbewu yesandiso kanye nesimiso sokumisa umzimba. Akaqambi izinhlelo. Uyazichazela empilweni ngokwazo. Kodwa leli khasi lokufunda lisho, ngokwalo, uhlelo ngokwayo, ngoba isiphethu esiseduze sokuziphendukela kwemvelo siyabuyekezwa.
Lokhu kuhlolisiswa ngokujulile kwemvelo yomuntu, okulandelwa isayensi yezinto ezingokomoya, kumele kutholakale ngendlela ephumelelayo kakhulu futhi ebonakalayo yokuxazulula imibuzo ebaluleke kakhulu esikhathini sethu. Sizosebenzisa lezi zimiso namuhla kulezi zinkinga, kumbuzo wemfundo. Lezi ngeke zibe izimangalo nezinhlelo; sizochaza, ngokumane, uhlobo lomntwana. Ngaphandle kokucela usizo lwethu, uhlobo lwezigaba ezilandelanayo zomuntu ekubunjweni luzophakamisa amaphuzu okubhekwa azolawula imfundo.
Ukuze siqonde imithetho yokukhula komuntu, kumele siqale sifunde umthethosisekelo wesintu.
Yiziphi izinzwa zethu ezinhlanu ezikwazi ukugcina futhi lokho okushiwo yizinto ezibonakalayo ezimemezela ukuthi umuntu ohlangene, ukuphenya ngemimoya, kuphela ingxenye, ingxenyana yobuntu, umzimba wakhe wenyama. Lo mzimba wenyama uphansi kwemithetho efanayo nokuphila ngokomzimba, uhlanganiswa nezinto ezifanayo kanye nemibuso efanayo nezwe lonke elingaphili. Ngakho isayensi engokomoya ithi umuntu unomzimba wenyama ngendlela efanayo nayo yonke umbuso wamaminerali. Futhi ichaza kumuntu, njengomzimba wenyama, kuphela isethi yezinto ezithobelayo, ukuze kuhlangane noma kucibilike, ukuma noma ukuhlakazeka, nemithetho elawula izinto ezifanayo embusweni wamaminerali.
Ngaphandle kwalomzimba womzimba, isayensi engokomoya isabona isimiso sesibili esibalulekile kumuntu: umzimba we-etheric noma umzimba onamandla. Vumela indoda yesayensi ingesabi igama elithi "umzimba otheksthi". Igama elithi "ether" libhekisela lapha kwenye into ngaphandle kwe-ether yokucabanga ye-physics. Inani leli gama kumele lihambisane nomqondo esizolifakazela ekuqaleni.
Esikhathini esithile esidlule kwaqala ukubhekwa njengenqubo engavumelani nesayensi yokuvuma "umzimba othekisayo". Nokho, ekupheleni kwekhulu leshumi nesishiyagalombili kuya phezulu phakathi nekhulu leshumi nesishiyagalolunye, lo mbono wawungekho "ongenasayensi". Kwacatshangwa ukuthi lolu daba kanye nemibutho eyenza amaminerali ayikwazi, ngokwabo, ukuguqula le mineralli ibe yindawo ephilayo. Lezi zinsuku kufanele zibe nokunye, "amandla" athile okuthiwa "amandla abalulekile". Omunye angase acabange ukuthi amandla alo hlobo asebenza kanjani esitshalweni, esilwaneni, emzimbeni womuntu. Yakha izinto ezibalulekile njengegunya lamagnetic elikhomba ukukhanga kumagnet.
Isikhathi sokuthanda izinto ezibonakalayo esilandelayo saqeda le mbono. Kwabe sekuthathwa ukuthi ukuhlaziywa komuntu ophilayo kwakufana nalokho okubizwa ngokuthi okungafihli; ukuthi isilwane esiphilayo asizange sibe neminye yamandla kunamaminerali, ukuthi kuphela umphumela wale mikhokha wawuyinkimbinkimbi, ukuthi kwakhiwe ukuthambekela okuyinkimbinkimbi. Njengamanje kukhona okungaphezu kwalabo abaqhakambisa kakhulu ukuphika lokhu "amandla okuphila". Esikhathini sosayensi yemvelo, iningi labalingisi liye lahliswa, ngamaqiniso, isidingo sokuvuma uhlobo olubalulekile lwamandla noma isimiso esibalulekile.
Ngakho-ke, ngezinye izindlela, isayensi yesimanje ifinyelela ukuthi yisiphi isayensi esingokomoya esisungula ngomzimba onamandla. Kodwa-ke, kukhona umehluko omkhulu phakathi kwalezi zihloko ezimbili. Isayensi yamanje, ephefumlelwe ukuqonda kwezinzwa, ifika, ngokucabanga, ukuvuma uhlobo olubalulekile lwamandla. Kodwa lokhu akuyona inqubo yokwenza ucwaningo lwezesayensi oluyisisekelo sokuqala kwesayensi yezinto ezingokomoya, futhi imiphumela yalo iyinikeza into yokuxhumana kwayo.
Ukuhlukaniswa okuyisisekelo, kusukela kulo mbono, phakathi kwesayensi engokomoya kanye nesayensi yesikhathi esizayo akukwazi ukugcizelela kakhulu. Iyabheka okuhlangenwe nakho kwezinzwa njengomsuka wazo lonke ulwazi. Konke okungakwazi ukubikwa kusezindaweni engaziwa. Ukuvezwa kwezinzwa kugqugquzela iziphetho zakhe kanye nokunciphisa, kodwa uyalahla izinto ezihamba ngaphesheya kwalokhu okubonakalayo futhi uzibeka ngaphandle kwemingcele yolwazi lomuntu. Kusukela ekubukeni kwesayensi engokomoya ukukhulelwa kwaloluhlobo kufana neyomuntu oyimpumputhe okuvuma kuphela okuhlangenwe nakho kokuthinta kanye nemiphumela emihle yalokhu okuhlangenwe nakho, nokulahla umbono wezinto ezibonakalayo ezingaphezu kwamandla engqondo. umoya wesintu. Isayensi engokomoya ibonisa ukuthi umuntu uyakwazi ukuthuthukiswa, ukuthi angakwazi ukwazi umhlaba omusha ngokushintsha izitho ezintsha. Imibala nokukhanya kuzungeze nxazonke umuntu oyimpumputhe ongaziqondi, izitho ezidingekayo zihluleka. Isayensi engokomoya ithi umhlaba wonke ungasondela umuntu futhi angakwazi ukungena, esimweni sokuthuthukisa izitho ezibalulekile ekuboneni kwabo.
Ezimpumputhe, ukuhlinzwa kuvula izwe elisha. Ngokuthuthukiswa kwezitho eziphakeme, umuntu angathola amazwe ahluke kakhulu kulabo abanenzwa evamile avumela ukuba afinyelele. Kungakhathaliseki ukuthi umuntu oyimpumputhe angaqhutshwa noma cha, kuxhomeke esimweni sezinhlaka zakhe. Kodwa izitho lapho umuntu angene khona emaphepheni e-hyperphysics akhona kulowo nalowo kithi embusweni wobumbano. Wonke umuntu angahlakulela lezi zitho; Kwanele ukuba ube nesineke, ukubekezela namandla okudingekile ukuzithoba ezindleleni eziholela kulo mphumela futhi ezichazwe encwadini yami Ukuqaliswa. Isayensi engokomoya ayisho ukuthi: Umuntu, ngenxa yenhlangano yakhe, unikwe izindlela ezinganiselwe zolwazi; kodwa uthi: Le ndoda iyazi ukuthi izizwe zayo zimvumela ukuba azigcine. Iyakhathazeka ngezindlela zokwehlisela umkhawulo wamandla ethu kuzo zonke izigaba zokuthuthukiswa komuntu.
Futhi yilo mbono futhi okugqugquzela ucwaningo lwakhe emzimbeni onamandla noma otheksthi nakuzo zonke izimiso eziphezulu zemvelo yabantu, ezibalwe kamuva kulolu cwaningo. Iqaphela ukuthi umzimba womzimba, owodwa, ufinyeleleka ekuphenyweni kwezinzwa zethu, futhi ukuthi lapho uxoxisana nabo, iningi lingakwazi ukuphetha, ngokucabanga, ukuba khona komzimba ophakeme. Kodwa lifundisa izindlela zokungenelela ezweni lapho izimiso eziphakeme zomuntu zivela ngaphambi kokuba umbonisi, njengoba ebonakala, emehlweni obala, ababala, imibala nokukhanya, emva kokusebenza. Kwabesilisa abaye bahlakulela izitho zokubona okuphakeme, umzimba we-etheric noma umzimba oguquguqukayo kuyiqiniso lokubheka, hhayi nje ukudala amandla ethu okucabanga.
Umzimba we-ethric noma oguqukayo uvame kubantu, ezilwaneni nasezitshalweni. Nguye osebenza ezindabeni kanye namandla omzimba womzimba, izimo zokukhula, ukukhiqiza, ukusakazwa kwe-sap, & c. Nguye owakha futhi onobuhle umzimba womzimba, okuyiwona ohlala kuwo kanye nomakhi. Futhi singabiza umzimba womzimba isithombe noma inkulumo yalesi sakhiwo esinamandla. Amafomu nobukhulu balezi zidumbu ezimbili, kumuntu, cishe kufana, kepha akufani neze. Ezilwaneni, kanti nakakhulu ezitshalweni, umzimba we-etheric uhluke kakhulu emzimbeni womzimba ekuhambiseni kwawo nokulingana.
Isimiso sesithathu sokwemvelo ngumzimba we-astral noma we-animic. Nguye obhala ubuhlungu nenjabulo, ekhombisa ukukhanya, izifiso, izinkanuko, njll. Zonke lezi zimfanelo zizobe zingekho ekwakheni kuphela umzimba womzimba kanye nomzimba we-etheric. Lezi zakhiwo zingafingqwa njengezinzwa. Lesi sitshalo asinikezwe inzwa. Ngenxa yokuthi izitshalo ezithile zithatha injabulo ngokunyakaza noma nganoma iyiphi enye indlela, ososayensi abangaphezu kweyodwa baphetha, namuhla, ukuthi izitshalo zinezinhlobo ezithile zokuzizwa. Kulezi ziqinisekiso, uhlamvu olubalulekile lwenzwa lulahlekelwe umbono. Akuhambisani nempendulo ekudumeni kwangaphandle, kodwa, ngokuphambene nalokho, esimweni sangaphakathi, njengokujabula noma ubuhlungu, umfutho, isifiso, njll, obangelwa yilokhu kukhuthazwa. Uma singayinaki leli phuzu, kungaba khona ukufakazela ukuthi i-tincture ye-sunflower inikwe ukuzwela ezintweni ezithile ngoba iphikisana nokuxhumana nabo.
Umuntu kanye nesilwane kuphela abanomzimba we-astral. Ungumgogodla wokuphila okuthakazelisayo.
Omunye kufanele agweme iphutha leminye imibuthano ye-theosophical ecabanga umzimba we-etheric nomzimba we-astral omane uqukethe izinto ezigqamile kunezo zomzimba wenyama. Kungaba yimigomo ephakeme yemvelo yomuntu. Umzimba we-etheric ungamandla afakwe ngendlela ethile. Iqukethe amabutho asebenzayo hhayi okusebenzayo; futhi umzimba we-astral noma we-animic ifomu elenziwe ngembala enemibala, ekhanyayo, ngokuziguqula ngokwawo ngokweqile.
Umzimba we-astral uhlukile emzimbeni womzimba ngesimo nobukhulu. Kubantu, kuthinta ukuma kwe-ovoid ehlanganisiwe, lapho umzimba womzimba nomzimba we-ethekthi ufakwa khona. Ubadlula bobabili nxazonke e-halo ekhanyayo.
Kodwa-ke, umuntu wehlukaniswa kwezinye izidalwa zasemhlabeni ngesici sesine: lokho okubonisa "i-Self" yakhe. Igama elincane "Mina", njengoba lisetshenziswa, ukwenza isibonelo, ngesiJalimane, igama elihluke kakhulu kubo bonke abanye. Ngokucabangisisa ngezakhiwo zaleli gama, sisuka sazi imvelo yomuntu. Noma yiliphi elinye igama lingasetshenziswa yibo bonke abantu besilisa ngaphandle kwento ehambelana nayo. Kuwo wonke umuntu, itafula lizobizwa ngokuthi “itafula ”, usihlalo uzobizwa ngokuthi“ usihlalo ”. Akufani uma kukhulunywa ngegama elithi "Mina". Akekho umuntu ongayisebenzisa ukuqoka omunye umuntu ngaphandle kwakho; ngamunye wethu angathi kungenxa yethu kuphela. Igama "Mina" alisoze lakhala endlebeni yami njengegama lami. Ngokuziqamba ngokuthi "Mina", umuntu kumele, ngokwakhe, azenzele igama lakhe. Umuntu ongathi "Mina" kuye ngokwakhe ngumhlaba wakhe. Izinkolo zesayensi engokomoya bezilokhu zilibona leli qiniso. Ngakho-ke bathi: "UNkulunkulu", owezidalwa eziphansi, uziveza yedwa ngaphandle kwento ezungezile, uqala, lapho kuvela u "Mina", ekhuluma ngaphakathi kokuba. Lobu bucayi buyimfanelo "yomzimba we-ego", umthetho wesine wesimo somuntu.
Kulesi "umzimba we-ego" ubonakala umphefumulo womuntu ophakeme. Ukwengezwa kwalo mzimba kuphakamisa umuntu esiqongweni semvelo yasemhlabeni. Kodwa lokhu "Mina" kumuntu wamanje akuyona neze into elula. Singabona isimo sawo ngokuqhathanisa amadoda anezigaba ezahlukene zokuziphendukela kwemvelo.
Hlola ukonakala okungajwayelekile kanye nesiko eliyisisekelo lase-Europe, bese uqhathanisa nokugcina isifiso esihle ngokweqile. Bonke banamandla okusho ngaphakathi kwabo ukuthi: "Mina"; "umzimba womuntu" ukhona kuwo ngamunye wabo. Kepha umsebezi ongakhonjwanga ohlanganiswe nalokhu "Mina ”ulalela izinkanuko zakhe, ukuthambekela nezifiso zakhe cishe njengesilwane. Uma indoda yempucuko ephakeme izilahla ekuthambekeleni okuthile nasezifisweni ezithile, kukhona abanye, ngakolunye uhlangothi, abayikhulumayo futhi abayicindezelayo. Ekugcineni, ngokubona okuhle, izinkanuko eziphakeme kanye nokuthambekela kwaphoqelela ukuthambekela kokuqala kanye nokukhanukela phansi. Konke lokhu kulungiswa kuvela esenzweni se- "Self" kwezinye izimiso, futhi lo msebenzi wenza umsebenzi we "Self" uqobo: ukunikela futhi ukuhlanza ngethonya lawo imizimba ephansi.
Ngakho-ke, kumuntu oye wadlula iphuzu lokuziphendukela kwemvelo lapho ephela ukuba yinto yokudlala yamandla angaphandle, imigomo ephansi iye yaguqulwa kancane kancane ngaphansi kwethonya "I". Ngesikhathi umuntu eqala ukuphakama ngaphezu kwesilwane, ngokungezwa "I," usalokhu efana nesilwane ngokwemvelo. Umzimba wakhe we-ethric noma oguquguqukayo uyingxenye yezinto ezibalulekile zokukhula nokukhiqiza. Umzimba wakhe we-astral ubonisa kuphela izimo, izifiso nezinkanuko ezifunwa yizinto zangaphandle. Ngenkathi umuntu, ngokuphila okulandelanayo noma okufakwe emzimbeni, kuvela kulolu daba lwezamasiko kuze kube nentuthuko ephelele nakakhulu, "I" wakhe umatasa ukuguqula ezinye izimiso zakhe. Umzimba we-astral uba yisihlalo semicabango ehlanzekile yenjabulo nobuhlungu, isifiso nesifiso esilungisiwe.
Umzimba we-etheric noma oguquguqukayo uguqulwa ngokuphenduka. Iba isihlalo semikhuba, ukuthambekela okuhlala njalo, ukuzithoba nokukhumbula. Indoda ebizwa ngokuthi "I" engakaze ishintshe umzimba we-etheric ayilondolozi imemori yemicimbi ephilayo. Uhlala impilo yakhe njengemvelo uye walandela.
Yonke inqubekela phambili yentuthuko ihunyushwe ngumuntu ngalokhu msebenzi we "I" ezimisweni zakhe ezingaphansi. Lo msebenzi wehlela emzimbeni womzimba. Ngaphansi kwethonya elithi "I" i-physiognomy, izenzo nezisindo ziguquliwe, sonke isici somzimba womzimba siguquliwe. Izindlela ezahlukene zempucuko nemfundo zenza isenzo esihlukile emigomeni ehlukene yomuntu. Izinto ezivamile zesikhungo zisebenza emzimbeni wesisu. Bammangalisa ngezinjabulo, ubuhlungu, kanye nezifiso zomyalelo ohluke kakhulu kulokho okwakuqala ukumcela. Ukucatshangelwa kwemisebenzi yobuciko kusebenza emzimbeni othintekayo. Umuntu uyaguqula ngokuzwa, ngenxa yomsebenzi wezobuciko, umhlaba ophakeme futhi ongcono kunombono wokubona izinzwa. Inkolo iyayithanda kakhulu intuthuko nokuhlanzwa komzimba we-etheric. Ngakho-ke impembelelo yenkolo inomsebenzi wabo omkhulu ekuziphendukeleni kwabantu.
Okubizwa ngokuthi ukuqaphela okuhle nokubi kungukuqhubeka komzimba we-etheric ngenxa yemizamo ye "I" ngokusebenzisa uchungechunge lweziqu zokuzalwa. Lokhu kuqaphela kuqala lapho umuntu, ebona ukuthi kumele akhiphe ukungaboni, uzizwa enesivimbela esondelene ngokwanele ukuze adluliselwe emzimbeni othintekayo.
Manje, lo msebenzi we "I", ukufeza imigomo ephansi, kungabangela, njengokungathi, kusukela emzamweni ohlangene wohlanga lonke lomuntu, noma kungaba nomthelela othile othi "Mina" ulungisa umzimba. Esimweni sokuqala, lonke uhlanga lwabantu luhlangana ngokuvumelana nalokhu ushintsho lomuntu; esimweni sesibili, kuzovela kuphela emsebenzini womuntu ngamunye "I". Lapho i "I" iba namandla ngokwanele ukuguqula umzimba we-astral ngokuthi yiyona kuphela amandla okuzidonsa yona ngokwayo, okuthiwa "i-Self Self" ibizwa ngokuthi umzimba we-astral kanjalo uguqulwa yi "I". Lolu shintsho luhlala, ezinkambisweni zalo ezibalulekile, ekutholeni ulwazi, ekucebiseni kwethu kwangaphakathi ngemibono kanye nemibono ephakeme.
Kodwa i- "I" ingakwazi ukufeza ithonya elikhulu kunazo zonke emzimbeni ahlala kuyo. Le miphumela ayitholakali kuphela lapho umzimba we-astral ucebisa, kepha uma umzimba we-etheric noma oguquguqukayo uphinde uguqulwe. Umuntu ufunda izinto eziningi esikhathini esizayo. Lapho, nganoma isiphi isikhathi, ebuka emuva, angasho ukuthi: "Ngiye ngafunda okuningi; kodwa uzobona ngokulinganiselwe kakhulu ukuguqulwa kwesimo sakhe sengqondo, isimo sakhe, ukwanda noma ukunciphisa inkumbulo. Ukufunda kuwumsebenzi womzimba we-astral, kanti lezi zimfanelo zisekelwe emzimbeni othintekayo noma onamandla. Ngokuqhathanisa izinguquko emzimbeni we-astral, ngesikhathi sokuphila, ekuhambeni kwesandla samaminithi ngokudayela kwewashi, kanye nezinguquko zomzimba we-ethekthi ekuhambeni kwenaliti ebonisa ihora, ukulinganisa okulingana ncamashi.
Ukuqeqeshwa kwemimoya, ukuchaza noma yikuphi ukuncintisana kwangaphandle, kubeka ukungena kokuphakathi kwe "I" ukuguqulwa komzimba otheksthi. Kukwazisa ngokugcwele futhi ngokuzimele ukuthi umfundi kufanele asebenze ekusebenzisaneni kwemikhuba yakhe, ubumnene, uhlamvu, inkumbulo, njll. Njengoba umzimba we-etheric uvuselelwe kabusha, uzoguqulwa, ngokusho kwesayensi engokomoya, ibe umoya wokuphila.
Ezingeni eliphakeme kakhulu, umuntu uyakwazi ukuthuthukisa amandla angasetshenziselwa ukuguqula umzimba wakhe wenyama. Kungenzeka, isibonelo, ukulawula ukugeleza kwegazi, lungisa u-pulse. Ingxenye yomzimba womzimba eguquliwe kanjalo ibizwa ngokuthi "umuntu womoya".
Izinguquko umuntu azibona ezimisweni zakhe eziphansi ngenxa yokuzibandakanya kwakhe emzamweni ohlanganyelwe womuntu wonke, noma kubantu, umncintiswano, umndeni, bahlukaniswa ngokwezesayensi ngokomoya ngamagama athile. Ngakho-ke kuguqulwa yi "I", umzimba we-astral uthatha igama lomphefumulo ozwelayo, umzimba we-etheric uba ngumqondo onengqondo, nomzimba womzimba ukukhathazeka komphefumulo. Nokho, akufanele sikholwe ukuthi ukuguqulwa kwalezi zimiso ezintathu kwenzeka ngokulandelana. Kwenzeka ngesikhathi esisodwa emizimbeni emithathu, ngokushesha nje lapho "I" ivela khona. Masibe sisho ukuthi umsebenzi we "I" awukwazi ukubonakala ngokucacile ngumuntu kuze kube yingxenye yomqondo wokuphefumula.
Ngakho-ke, sibheka emuntwini, izimiso ezine ezihlukene: umzimba womzimba, umzimba othekisayo noma onamandla, umzimba we-astral noma we-animic, nomzimba we "I". Umphefumulo onomqondo, umphefumulo onengqondo nomphefumulo-ukuqonda, ngisho nemigomo ephakeme yobuntu: "Ukuzivocavoca," umoya wokuphila, nomuntu womoya, kubonakala njengomphumela wokuguqulwa kwalezi zimiso ezine. Uma umuntu efuna isihlalo semfanelo yomuntu, umuntu, empeleni, angazicabangela lokhu kuphela. Yenza insimu yomsebenzi womfundisi.
Ukwenza umsebenzi othakazelisayo, umuntu kumele ahlole uhlobo lwale migomo. Ngaphezu kwakho konke, kubalulekile ukuqaphela ukuthi lezi zingaguquki kumuntu ukuze zethule, noma nini esikhathini sokuphila kwakhe, ngesikhathi sokuzalwa, isibonelo, izinga elifanayo lokuthuthukiswa. Lokhu okugcina, ngokuphambene nalokho, kuyaqhubeka ngomzimba ngamunye ngendlela ehlukile eya eminyakeni ehlukene yokuphila. Ukwaziswa kwemithetho elawula ukuthuthukiswa okulandelanayo kwemvelo kubangelwa iziqalo ezibalulekile zemfundo nokufundisa.
Ngaphambi kokuzalwa ngokomzimba, umuntu owenzayo uzungeza nxazonke ngomzimba wangaphandle. Akahambisani ngokuqondile nezwe langaphandle.
Umzimba womzimba ungowabo. Nguye yedwa ongenza ngokuphathelene nengane ekhulayo. Ukuzalwa ngokomzimba kuqukethe ngokuqondile ukuthi amathonya angaphandle angakwazi ukufinyelela, ngqo, ingane enqatshelwe imvilophu yomzimba. Izinzwa ezivulekele ezweni elingaphandle, isenzo esithatha indawo, manje, esasetshenziswa ngaphambili imvilophu yomama.
Kusukela ekubukeni komqondo ongokomoya wendawo yonke efanele ukuphenywa ngokomoya, umzimba wenyama wazalwa ngaleso sikhathi, kodwa hhayi okwamanje umzimba we-etheric noma oguqukayo. Njengoba nje le ndoda, kuze kufike ngesikhathi sokuzalwa kwakhe, ifakwe emvilopheni yomzimba, ukuze kuze kube sesikhathini sesibili sezinyosi, okusho ukuthi kuze kube seyesikhombisa ngonyaka, ihlala ihlanganiswe emvilophini ethintekile nangemvilophu ye-astral. Kuphela ngesikhatsi sesivivinyo sesibili ukuthi imvilophu ye-ethekthi ihlukanisa nomzimba we-ethekthi. Khona-ke imvilophu yezinkanyezi iqhubeka ikhona kuze kube yilapho sekukhulelwa.
Ngalesi sikhathi, isidumbu se-astral noma i-animic sikhululwa; isenzakalo esenzekile, ngenxa yomzimba wenyama, ekuzalweni kwangokwenyama, kanye nomzimba we-ethekthini wesinye isivivinyo sesibili uphindwa umzimba womzimba we-astral.
Ngakho, isayensi engokomoya ikhuluma ngokuzalwa okulandelana kathathu. Kuze kube yilapho i-dentition yesibili, ukubonakala okuthile okwenzelwa umzimba we-etheric kungenakufinyelela kancane njengoba ukukhanya nomoya wezwe lomzimba kufinyelela emzimbeni womzimba esibelethweni somama.
Ngaphambi kwesivivinyo sesibili, akuwona umzimba onamandla wokuzimela owenza isenzo salo kwengane.
Umzimba womama uye wakondla umzimba we-embryonic ngamandla angesiwo amandla ayo, futhi awuthuthukise kancane kancane emvilophini evikelayo. Kuyoba namandla afanayo ekukhuleni kuya kwesinye isivivinyo samazinyo. Umzimba we-etheric, ukuze uthuthukise amandla ayo, uqale usebenzise usizo lwamaqembu angaphandle asetshenziselwe kuwo. Phakathi nalesi sikhathi esilungiselela ukukhululwa komzimba otheksthi, umzimba womzimba usuvele uzimele. Umzimba we-etheric, ekukhuliseni, ukhulisa amandla azobeka enkonzweni yomzimba. Futhi iphuzu lokugcina lalezi zinqubo yilapho ingane ishintsha amazinyo akhe kulabo abazuze njengefa. Zenza izinto ezimbi kakhulu zomzimba, ngakho-ke zivele kuphela ekupheleni kwalesi sikhathi.
Kusukela ngaleso sikhathi, ngumzimba ngamunye we-etheric owodwa oqaphela ukukhula. Kodwa lesi sitho esithembekile sisekhona, ngalesi sikhathi, ngaphansi kwethonya lomzimba we-astral ogcwele umgogodla wokuqeda. Ngesikhathi umzimba we-astral ukhululwa, umzimba othekisayo uqeda isigaba esisha. Ucingo lubikwa ngobusha. Izitho zokuzala zizimele, ngoba manje umzimba we-astral okhululwe awusakhululwa kuphela; ekhululiwe emakhonkheni ayo, iyafinyeleleka ekuxhumaneni nomhlaba wangaphandle.
Siyazi ukuthi ngaphambi kokuzalwa ingane iphephile emathonyeni aleli zwe langaphandle. Ngokufanayo, umuntu kufanele agweme ukudalula umzimba we-etheric, ngaphambi kohlobo lwesibili lwamazinyo, emagunyeni amele afane nalokho okubonakalayo emzimbeni womzimba. Futhi umzimba we-astral akufanele ube ngaphansi kwamathonya afanayo ngaphambi komzuzu wokukhulelwa.
Azizona i-harangues enesizotha njengalokhu: "ukuthuthukiswa okuhambelana nazo zonke izici namandla omuntu" noma eminye imishwana efana nayo engabeka isisekelo sobuciko bemfundo ngomqondo wangempela wezwi; lokhu ubuciko kuphela kuphela ngokusekelwe kolwazi oluhle lomuntu. Lokhu akusho ukuthi lezi zintengiselwano zenziwe ngendlela engalungile, kodwa ukuzisebenzisa kuyinkqubo engavumelekile njengoba kushicilelwa, phambi komshini, ukuthi konke okusebenzayo kufanele kusetshenziswe kahle. Ukusingatha umshini owodwa kumele awusondele, hhayi ngemibono ejwayelekile, kodwa ngolwazi lwangempela yonke imininingwane yalo. Futhi, ngokufanayo, ngobuciko bemfundo, ulwazi lwezo zonke izimiso zesimo somuntu kanye nokuthuthukiswa komunye wabo ikakhulukazi kuyadingeka ... Kubalulekile ukwazi ukuthi yingxenye yendalo yomuntu ilungile ukwenza okuthile ngesikhathi esithile, futhi ukuthi kusho ukuthini lesi senzo esetshenziswa kahle.
Akungabazeki ukuthi izinqubo zangempela ezisekelwe ngokoqobo, njengoba kuchaziwe lapha, ziphumelela kancane kancane emfundweni. Lokhu kungenxa yemibono yesikhathi sethu; Kuyisikhathi eside uzocabangela amaqiniso ezwe elingokomoya njengengqondo yokucabanga embi, kuyilapho ukuqinisekiswa okungaqondakali, okungafani nakho konke okuyiqiniso, kuyobonakala kubangelwa umcabango omuhle kakhulu. Ake sibonise ngaphandle kokungabaza, noma kunjalo, le ndlela engeke ihluleke, okwamanje, ukuba ibhekwe njengenganekwane ehlanzekile; esikhathini esizayo, ngakolunye uhlangothi, ngeke kuhlangane nezinye izikhalazo.
Ukuzalwa ngokomzimba kudlulisela isidumbu somzimba emzimbeni womhlaba wangaphandle, kanti ngaphambi kokuba kuhlukaniswe imvilophu yokuvikela. Isenzo esenziwa ngaphambilini ngamandla kanye nezicubu zalo mvilophu manje kubikwe amandla kanye nezakhi zezwe langaphandle. Kuze kube yinto yesibili yamazinyo, umzimba womuntu kufanele uzienzele umsebenzi ohluke kakhulu kulabo abazovela kwezinye izikhathi zokuphila. Izitho zangokwenyama kumele ngalesi sikhathi isikhunta zibe izinhlobo ezithile; Kumele zakhiwe ngokuvumelana nenqubo eqondile elawula ukulinganisa okufanayo kwesakhiwo sabo. Ukukhula kwesikhathi kuzokwenzeka, kodwa ngaso sonke isikhathi kuyobe kunqunyelwe emafomu azoqinisekiswa kuze kube unyaka wesikhombisa. Uma amafomu asethuthukile ajwayelekile, azoba amafomu avamile azokhula; uma zingamafomu angavamile, lezi fomu ezingavamile ziyokhula. Amaphutha wemfundo engahoxisiwe phakathi nalesi sikhathi sokuqala ayikwazi ukulungiswa kamuva. Njengoba nje imvelo inikeza ngaphambi kokuzalwa imvelo edingekayo emzimbeni womzimba, ngakho-ke kumfundisi, emva kokuzalwa, ukuhlela imvelo efiselekayo yenyama. Ukuhlelwa kwenyama okuzwakalayo kuphela okubeka ezingxenyeni zomzimba ukushicilelwa kwamafomu adingekayo.
Amagama amabili emilingo abonisa uhlobo lobuhlobo bomntwana nendawo yakhe engokwenyama. Lawa magama: ukulingisa kanye nephethini. U-Aristotle uthe ngomuntu ukuthi, yizo zonke izilwane, ezithandwa kakhulu ukulingisa; ayikho iminyaka yokuphila lapho leli gama lisebenza kangcono kunasebuntwaneni kuze kube yilapho isondlo sesibili. Umntwana ulingisa amaqiniso kanye nokuzibonakalisa komzimba wakhe futhi, ukuze alingise kanjalo, izitho zakhe zomzimba zizokwamukela amafomu azohlala ngemuva kwalokho. Igama elithi "imvelo engokwemvelo" liqondwa ngomqondo obanzi kakhulu. Akubandakanyi nje izigameko ezibonakalayo ezenzeka phambi kwengane, kodwa konke okwenzeka endaweni yakhe, okungaqondwa yizinzwa zakhe nokuthi yini, kusukela kunoma iyiphi indawo esikhaleni, ingakwazi yenza ngokusemandleni engqondo yakhe. Kule nqubo yamaqiniso abuye ahlelwe zonke izenzo zokuziphatha nezokuziphatha okubi, ezinengqondo noma ezingenangqondo lapho umntwana engufakazi.
Lawa aphorisms hhayi zokuziphatha kungukuthi wabonisana zikhuthazo ukuqinisekisa ukuthi umumo wengane ohlangothini eboniswe, kodwa izenzo abantu Abakhulu ngokucacile beka phambi kwamehlo akhe. Izimfundiso ningenzi, ngoba akhombe bobunjwa, ku umzimba wenyama, kodwa umzimba kubalulekile, kanti isixuku esikhulu, kuze ngonyaka wesikhombisa, unikezwa okuzenzakalelayo emgodleni etheric ekuvikeleni, njengoba umzimba womzimba uvalwe, kuze kube sekuzalweni ngokomzimba, emzimbeni womama. Konke okusemzimbeni othintekayo kufanele kuthuthuke ngaphambi konyaka wesikhombisa ngokwemibono, imikhuba, imemori, njll, kuzokhula ngokuzenzekelayo, njengamehlo nezindlebe ezikhulayo ngesikhathi esifanayo. ngaphakathi komzimba womama ngaphandle kosizo lwangaphandle kokukhanya ...
Esikhatsini esihle kakhulu se-pedagogy, in Levana ou Imfundiso yezemfundoKusukela kuJohn Paul, kuhlonishwa ngokucophelela ukuthi umuntu ohambahamba, ehamba phakathi kwendawo yonke, uyobe esefunde okwengeziwe kumhlengikazi wakhe eminyakeni yokuqala yokuphila kwakhe kunanoma yikuphi ukuhamba kwakhe okulandelayo. Kuphela, ingane ayifunde izimfundiso, kodwa ngokulingisa, futhi izitho zakhe zomzimba zithatha amafomu abo ngethonya lendawo engokwemvelo. Iso lizokwaziswa ngendlela evamile lapho, emvelweni wengane, imibala nokukhanya kuzohlelwa ngobudlelwane obufanele; futhi ebuchosheni kanye nokusabalalisa kwegazi kubeka izici zomzimba ngokomqondo wokuziphatha okuhle, lapho imisebenzi ingane efakaza ngayo yokuziphatha. Uma, ngaphambi konyaka wesikhombisa, ingane ingena ezenzweni zobuwula kuphela, ubuchopho buthatha izinhlobo ezinjalo kangangokuba empilweni yonke impilo iyafaneleka kuphela.
Imisipha yesandla ithuthukisa amandla abo ngokuwenza umsebenzi ngokuhambisana nomsebenzi wabo. Ngendlela efanayo, ubuchopho kanye nezinye izitho zomzimba womuntu zikhonjiswe ngezindlela ezifanele, uma zithola ezivela endaweni yazo iziboniso zokunquma. Isibonelo sizogqamisa leli phuzu elibalulekile. One angenza unodoli kweqa i ithawula ubudala, yokukhiqiza kanye emikhawulweni yomibili imilenze ithawula, ingalo nge emikhawulweni emibili, nge-node ikhanda futhi unikelwe inki amabala, amehlo, ikhala nomlomo. Omunye angabuye athenge lokho okubizwa ngokuthi i "doll enhle" enezinwele zangempela namathunga aqoshiwe, futhi ayinike ingane. Le doll enhle, yebo, iyingozi kabi futhi ifanelana kahle ukuze inonakalise umqondo wokubukeka impilo yonke. Kodwa ngeke siphikelele kuleli phuzu, ngoba umbuzo omkhulu wemfundo uhlelekile. Ingane, ephethe phambi kwendwangu yesikhumba, kuzodingeka iqedele lesi sithombe emcabangweni wakhe wokuguqula le nto ibe ngumuntu. Lo msebenzi wokucabangela usebenza futhi uqondise ukuhlelwa kwezinhlobo zobuchopho. Ikhula futhi ikhule, njengoba izihluthulelo zesandla zilula futhi zikhulile. Uma ingane ithola "udonsa omuhle", umsebenzi wobuchopho uyalala. Loma futhi lifa esikhundleni sokuvela.
Uma abantu bekwazi ukubuka isikhashana ekuthuthukeni kwengqondo, bekwazi ukunikeza izingane zabo amathoyizi kuphela ukuze balondoloze futhi bavuselele umsebenzi owenza ubuchopho. Wonke amathoyizi ahlanganisa ukwakha izibalo ze-inert anomthelela ocindezelayo nomonakalo ebusweni bomntwana obuthandayo; Ngokuphambene nalokho, konke okuletha impilo emifanekisweni kwenza ngendlela enenzuzo. Isikhathi sethu sokuthanda izinto ezibonakalayo sikhiqiza amathoyizi ambalwa nje amnandi. Yeka ithoyizi enempilo, isibonelo, laba abakhiqizi ababili ababhekene nobunzima babhekene ubuso nobuso ukuthi, ngokusebenzisa izingcezu ezimbili zezinkuni ezihambayo, ngenye indlela bakha into ehlabayo! Sisakwazi ukuhlangabezana nalezi zithayi emaphandleni. Amabhuku ezithombe, izihloko zazo ezingashukunyiswa izintambo, nazo zihle kakhulu ngoba zivumela isinyathelo somntwana ukuguqula isithombe esishonile sibe yindawo ephathekayo. Zonke lezi zinto zakha umsebenzi wangaphakathi wezitho. Lo msebenzi ubapha ifomu elifanele kakhulu.
Kusobala ukuthi lo mdwebo osheshayo uthintana nalesi sihloko; kodwa isayensi engokomoya iyobizwa esikhathini esizayo ukucacisa imininingwane edingekayo. Uzokwazi ukwenza lokhu ngoba akuyona into engafanele. Kuyinto ephelele yamaqiniso, ekwazi ukusiqondisa empeleni.
Ake sithi ezinye izibonelo. Kudingekile, ngomoya wesayensi engokomoya, ukuthi uphathe ngendlela ehlukile, kusukela ekubukeni kwendawo ezungezile, ingane ephazamisayo, ehlukumezayo, nengane esindayo futhi ilele. Yonke imininingwane kufanele icatshangelwe, kusukela emibala ekamelweni nezinye izinto ingane evame ukuyozungezile, kumanothi wezingubo azigqoka.
Kulabo abangaqondiswa isayensi engokomoya, ngokuvamile kuzokwenzeka okungalungile. Umoya wokuthanda izinto ezibonakalayo uyovame ukuthatha izinyathelo eziphikisana nalabo abazobe besaba khona. Ingane ehlukumezeka kakhulu kumele ihlotshwe ngemibala ebomvu noma ephuzi futhi igqoke ngendlela efanayo; ngenkathi umuntu ekhetha, ngengane ene-lethargic temperament, amathoni aluhlaza okwesibhakabhaka noma aluhlaza okwesibhakabhaka nohlaza okwesibhakabhaka. Okubaluleke kakhulu umbala ohambisanayo ovuswa ngaphakathi. Olubomvu uveza umbala ohlaza okwesibhakabhaka, umbala ophuzi ophuzi obomvu, okulula ukubona ngokushesha ngokubeka amehlo akho ebusweni obumhlophe, ubeke isikhathi esithile, ngayinye yale mibala emibili. Le mibala ehambisanayo eyenziwa yizitho zomzimba zengane, yakha izakhiwo zamalungu ahambisanayo futhi okudingekayo kumntwana. Uma ingane encane ibona ibomvu emzungezile, isithombe esiluhlaza esihlanganisiwe sikhiqizwa ngaphakathi. Umsebenti odala umbala oluhlaza usebenza ngendlela epholile. Izitho zigxila kulo mkhuba wokuzola.
I-capital capital ibusa ngalesi sizukulwane: njengoba ukujwayela kwezifiso kufakazela ngokwayo, umzimba wenyama udala ngokwayo itshe lokuthinta elizokwenza ukuthi likwazi ukusebenza. Umzimba ophilile ngokuvamile ubonisa izifiso zothando. Futhi uma nje ukukhula kubeka umzimba womzimba ekukhanyeni, kufanele silwele ukwanelisa izifiso zemvelo kanye nezikhalazo ezinengqondo ngenjabulo nenhlalakahle. Injabulo yimbangela eyenza ukugcwaliseka kwenjabulo yezinhlobo zomzimba.
Umuntu angakwazi, ngokwenza lokhu kwemibono, enze amaphutha amakhulu, ngokungaqiniseki ubudlelwane obuhle phakathi kwengane nemvelo yakhe. Isimo sokudla ikakhulukazi sibonisa amaphutha alula. Umuntu angakwazi ukuphazamisa ngokuphelele impilo yakhe enempilo nangokwemvelo, ngenkathi esebenzisa ukudla okufanele, umuntu angagcina izimo zakhe zemvelo ukuze azibuze ngokuqondile, ukuze ingilazi yamanzi eduze, ukudla okunempilo ngaphansi kwezimo ezinikeziwe, nokuthi ngeke enqabe noma yini eyingozi. Ebizwe ukudala uhlelo lwemfundo, isayensi yezomnotho izokwazi ukunweba izinkomba ezifika ngesikhathi kwimininingwane yokudla. Ngoba le sayensi iyisici esihle sokuthonya impilo. Akuyona inkolelo embala. Kuyiqiniso ukuthi umehluko wamanye ama-theosophist kubonakala sengathi ulungele lokhu kuchazwa.
Phakathi amandla ukuthi ukunquma isenzo wokudala izinhlobo izitho ngokomzimba, kumelwe yisho injabulo liphefumulelwe ukulandelwa ukuthi uzizwa nokuzola injabulo smiling ubuso, futhi ngaphezu kwakho konke uthando oluqotho kanye nokuguqulwa, ngaphandle umkhawulo. I-current of tenderness enjalo ivuselela, ngokusho, indawo engokwemvelo, futhi, uma umuntu ekwazi ukuziveza, uhlanganisa amafomu ezitho zomzimba.
Uma kuleso simo umntanakho angenele esimweni esinjalo sokuthandwa ngokomzimba, kufakwa esithombeni sayo sangempela. Ngakho-ke kufanele kucatshangelwe ukuthi emkhathini wengane akukho okwenzekayo ukuthi akakwazi futhi angalingisi. Ake angaboni lutho olufanele uthi: akufanele wenze lokho! Kulula ukuziqinisekisa ukuthi ingane ilingisa kangakanani, ngokubheka imizamo yakhe yokuzala izibonakaliso zengane. ukubhala isikhathi eside ngaphambi kokuba aziqonde. Kuyinto enhle kakhulu ukuthi ingane ikhulele lezi zimpawu kuqala futhi ingazifundi kamuva. Ukulingisa kuvela esikhathini sokuthuthukiswa komzimba wenyama, kanti incazelo yezinhlamvu ibhekisela emzimbeni we-etheric. Omunye kufanele asebenze kulokhu okwedlule emva kokuqamba kwamazinyo wesibili, lapho imvilophu yayo yangaphandle ivinjelwe. Ngokuyinhloko, phakathi nale minyaka, izingane kufanele zifundiswe ukukhuluma kuphela ngokusebenzisa isimo sabo sokulingisa. Kungenxa yendlebe ukuthi bafunda kangcono kakhulu. Yonke imithetho nezindlela zokufakelwa akufanelekile.
Phakathi nenkathi yokuqala yeminyaka, kubaluleke kakhulu ukuthi imfundo efana nezingoma zezingane yenza, ngombono wengane, umbono omuhle wesigqi. Kumelwe sihlanganise inani eliphansi kuncazelo yamazwi kunokwakheka komculo. Uma kuvezwa umbono ohlotsheni emehlweni noma indlebe iyoba nomusa nokushayeka, kungcono ukuthi kuzokwenza. Akufanele sishaye indiva, isibonelo, amandla okudala asetshenziselwa izitho zomdanso wezingoma ezikhala ngokuvumelana nesigqi somculo.
Ngesikhathi somzimba wama-second body umzimba we-etheric uvula imvilophu yayo e-ethekthi futhi ngaleyo ndlela uvula isikhathi sokufinyelela emfundweni yangaphandle. Kudingekile, ngalesi sikhathi, ukuthi sisebenze emagunyeni angaphandle, angaphandle, angasebenza emzimbeni we-etheric. Ukwakhiwa nokukhula kwalo kubonisa: ukuthuthukiswa nokuziphendukela kwemicabango, imikhuba, unembeza wokuziphatha, umlingiswa, inkumbulo, ubumnene. Umzimba we-etheric uhlatshwa umxhwele yizithombe, ngezibonelo, ngesiyalo somcabango. Njengoba kudingekile ukuhlinzeka ingane, kuze kube yonyaka wakhe wesikhombisa, imodeli engokomzimba angayilingisa, kuyadingeka, phakathi kwe-dentition yesibili kanye nokukhulelwa, ukuzungeze ingane yakho enezici ezinomqondo ojulile futhi ububanzi obuseduze bungalalela umphefumulo wakhe. Manje kuyoba nethuba lesithombe nesithombe.
Amandla emzimbeni we-etheksthi avela lapho umcabango ongekho emthethweni ungathola ukuphefumulelwa ekuziphatheni kwawo ezimpawu eziwuhlaba umxhwele noma emibonweni yokuphila. Akuyona imidwebo engabonakali leyo ethinta kakhulu umzimba we-etheric ekukhuleni, kodwa okubonakalayo okubonakalayo; futhi hhayi okwamanje okubhekiswe ezingqondweni zomzimba, kodwa lezo ezithinta ingqondo. Ukukhuluma nomqondo womphefumulo, phakathi nale minyaka, izindlela zokufundisa zeqiniso. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuthi le nsizwa, phakathi nalesi sikhathi, ukuba ibe khona ngaphakathi kwayo, kumuntu ngokwakhe oothisha bayo, abazicabangelayo abavusa amandla akhe ekuziphatheni nasekuhlakanipheni okumelwe azuze.
Ngokweminyaka yokuqala yobuntwana, izenzo zemilingo zithi: "ukulingisa" kanye nomodeli "; ngoba iminyaka esiyisebenzisayo manje, "ukuzithoba" kanye "negunya" kuphumelela kubo. Isiphathimandla esivunyelwe ngokushesha futhi esingenasikhathi sinye kumele sibe ukumelela okuqondile kwangaphakathi okwenza izakhi zenembeza yokuziphatha ensizwa, imikhuba yakhe, ukuthambekela kwakhe; yilo gunya eliqondisa ukufutheka kwalo, elibala imiqondo yalo yezinto zomhlaba. Kule minyaka yokuphila iyasebenza, ikakhulukazi le mbono yombongi:
Ezinyathelweni zeqhawe ozikhethayo,
Khuphuka, ungakhathali, ufike endaweni ephakeme kakhulu.
Ukuhlonipha nokuhlonipha kubangela ukuthi umzimba we-etheric uqhube ngendlela ejabulisayo kakhulu; le nsizwa yalesi sizukulwane engakwazi ukunikela kunoma ubani inkokhelo yokuhlonipha okungapheli, izobhekana nakho konke ukuphila kwakhe. Ukungabikho kwalokhu kuhlonipha kwenza amandla okuphila emzimbeni we-etheric abonakale. Cabangela isiqephu esilandelayo ekusebenzeni kwayo ngenhliziyo yentsha. Umfana oneminyaka eyisishiyagalombili ubudala onomuntu ohloniphekile kakhulu ukhuliswa. Konke okuzwayo kuyo kuyamhlonipha. Usuku lusondela lapho uzobona khona okokuqala ukuthi ubuntu abubeka phezulu. Ngesikhathi sokuvula umnyango ngemuva kokuthi indoda ehloniphekile izovela, imizwelo ehloniphayo yenza le ndodana ithuthumele ... Imizwa emihle ephefumulelwe umcimbi onjalo iphakathi kokuncintisana okuhlala njalo kokuphila. Uyajabula leyo nsizwa ukuthi, hhayi kuphela ngezikhathi ezibucayi, kodwa ngokuphila kwansuku zonke, izokwazi ukuphakamisela amehlo othisha bakhe nothisha bayo kanye neziphathimandla zakhe zemvelo.
Ngaphandle kwalezi ziphathimandla eziphilayo, lezi zingxenye zezimfanelo zokuziphatha nezengqondo, kufanele zibekwe iziphathimandla zesizinda somoya. Amaqhawe omlando, izindaba ezithathwe ezimpilweni zamadoda nabesifazane abakhulu abafanelekile ukuba babe yizibonelo, kufanele ziqaphele ukuqonda, ukuqondisa kwengqondo. Kamuva nje kuphela izimiso zokuziphatha ezingabonakali ezingadlala indima yabo yangempela, lapho umzimba we-astral, ubusuku obuzayo, uzovela emvilophini womama wesisu.
Kubaluleke kakhulu ukuqondisa imfundiso yomlando ngendlela ehambisana nalezi zindawo zokubuka. Ngaphambi kwesivivinyo sesibili, ama-anecdotes, izindaba, njll. ngubani okhuluma nengane ngeke abe nenhloso ngaphandle kokusakaza injabulo, ukuvuselela, ukuzethemba.
Emva kwalesi sikhathi kuzodingeka, ngokuzikhethela kwezindaba, ukuzama, ngaphezu kwalokho, ukunikela emphefumulweni wezinsizwa izithombe zokuphila ezimvuselela ekuthumeni. Kumele futhi kukhunjulwe ukuthi umkhuba omubi ungasuswa yizithombe ezikhuthaza ukungathandi. Izixwayiso zizosetshenziswa kangako; kodwa cindezela umcabango ngokukhuluma ngomuntu ohlukumezeka ngalezi zindlela futhi anikele umbukiso wemiphumela abaholela ekuphileni, futhi uzosheshisa ukususwa kwalezi ziphutha.
Kuyohlale kudingekile ukuba ukhumbule ukuthi akuyona imibono engacacile eyenza umzimba we-etheric ekubunjweni, kodwa izethulo eziphilayo, ezikhangisa emcabangweni. Ukusetshenziswa kwezinqubo ezinjalo kudinga, kuyiqiniso, ukuhlakanipha okukhulu, ngaphandle kwalokho umphumela ohlukile ungaholela. Konke lapha kuncike endleleni yokutshela, ngakho-ke, akunakwenzeka, ngakho, ngaphandle kokuphazanyiswa, esikhundleni sencwadi yomlomo ngokufunda.
Izethulo zokufanisa, ukukhunjulwa okungokomfanekiso, ukugcwalisa nenye enye indima phakathi nesikhathi esiphakathi kwe-dentition yesibili kanye nokukhulelwa. Kubalulekile ukuthi le nsizwa ifinyelele imfihlakalo yemvelo, imithetho yokuphila, ngesimo sezimpawu kunokuba isebenzise imibono eqondile yokucabanga. Izinkulumo zokuzikhethela kobudlelwane obungokomoya kumele zinikezwe emphefumulweni ngendlela yokuthi imithetho ewalawulayo ijwayele ukuqagela futhi izwe, kunokuba ibambe iqhaza layo. Ivesi likaGetheethe: "I-ephemeral kuphela uphawu" kumele ibe yindlela ekhuthazayo yemfundo ngalesi sikhathi. Kubaluleke kakhulu ukuba umuntu athole izimfihlakalo zokuphila ngaphansi kwesihenqo sezithombe ezingokomfanekiso, ngaphambi kokuzamukela ngezindlela zemvelo, njll. Nasi isibonelo. Ake sithi sifuna ukuthakazelisa insizwa ekungafi komphefumulo, lapho ihlukaniswa nomzimba. Sizosebenzisa ukuqhathaniswa kwe-butterfly ukuxhuma ku-chrysalis. Njengoba nje i-butterfly ilahla i-chrysalis, ngakho-ke umphefumulo, ngemva kokufa, ushiya imvilophu yomzimba. Ukuze i-intelligence ikwazi ukuqonda iqiniso eliqondile ngokunembile nangemva kwesikhathi, kubalulekile ukuthi umphefumulo usuke uthola umbono ngaphambilini ngesithombe salolu hlobo. Inkolelo enjalo, eqinisweni, ayibhekiswa kuphela ekuhlakanipheni, kepha ekuzwa, ekuqondeni, emphefumulweni wonke. Insizwa eye yahamba nakho konke lokhu okubonakalayo izoveza isimo sengqondo esihluke kakhulu lapho, kamuva, ukuhlakanipha kwakhe kubhekene nale mibuzo. Kuyingozi ukuthi umuntu angakwazi ukusondela, okokuqala, izici zokuphila. Umfundisi kumele aphefumulelwe isidingo sokuthola izimpawu kuzo zonke imithetho yemvelo, ngenxa yemfihlakalo yonke yomhlaba.
Lezi zindlela zenza kube lula ukuqonda ithonya elicebile isayensi engokomoya ebizwa ukuba isebenzise ngokuphila okusebenzayo. Zama ukuphakamisa abantu abasha abalingiswa abaphefumulelwe ukucabanga ngezinto ezibonakalayo; ngokuvamile ngeke uzijabulise; lezi zibonakaliso ngokwayo ziyoba kuphela ukukhishwa okucashile komcabango ogqilaziwe wokucabanga. Ngokuzihlanganisa ngokuhlangene futhi kulungiselelwe, azibandakanyi i-interlocutor. Ngempela, isichazamazwi asenzi nje kuphela ngamazwi nezithombe, kodwa ngokugeleza okungokomoya okucashile okwesikhashana okuxhuma isikhulumi kumlaleli. Ngaphandle komthetho obuseduze owuphawu lwawo, isikhulumi ngeke sikhiqize. Ukuze usebenzise isenzo esiwusizo, umuntu kufanele akholelwe uphawu lomuntu njengeqiniso.
Isayensi kuphela engokomoya inikeza lokhu ukuqinisekisa futhi ngesikhathi esifanayo inikeza izimpawu ngokwazo. Umlingo akadingi ukuhlukumeza ingqondo yakhe ukwakha umfanekiso womphefumulo oshiya umzimba. Kuye, lesi simboli yiqiniso ngokwalo. Emehlweni akhe, i-butterfly ebalekela i-chrysalis empeleni, ngezinga elingezansi lokuphila kwemvelo, into ephindaphinda ehloniphekile kwisizinda esiphezulu, lapho umphefumulo ushiya umzimba. Ukholelwa kulo ngokwakhe ngamandla akhe onke. Futhi okwamanje okungaqondakali kwalokhu kukholwa, kusakazwa kumlaleli, kunquma ukukholwa kwakhe. Umvuthwandaba wokuphila ubese uhlanganisa umfundisi kanye nomfundi futhi ubenze baxoxe. Kodwa ukuze akhiqize, uthisha kumele athole umthombo ophilayo wesayensi engokomoya. Ukuzizwa, ukushisa okuvuthayo kuzothuthukisa izwi lakhe nakho konke okuvela kuye.
Umbono okhazimulayo ngaleyo ndlela uvula imfundo. Lapho ethola izakhi zokuphila ezinikeza isayensi yezinto ezingokomoya, uzongena phakathi kwakhe ngokuphila okucebile nokuhlelekayo. Lokhu kuyoba yikhala lesilingo nesiphambeko, okukulo mkhakha, okwenza uhlelo lwamanje. Zonke izindlela zezemfundo kanye nokufundisa okushiwo ukuvuthwa kwempuphu engapheliyo ephuma emthonjeni onjalo, abakhululekile empilweni futhi bahlaselwa yisifo sobuncwane. Isayensi engokomoya inezo zonke izimfihlakalo zendawo yonke izimpawu ezifanele, izithombe ezihlotshaniswa nokubaluleka kwezinto. Indoda ayidingi ukuyikwakha. Amandla okudala omhlaba wonke abashicilele emisebenzini yabo. Kungenxa yalezi zindaba ukuthi isayensi yezinto ezingokomoya kufanele ibe yiyona ndlela yokufundisa.
Imemori iyinhlangano yomphefumulo ofanele ukunakekelwa okukhethekile phakathi nalesi sikhathi. Ukuthuthukiswa kwalo kuhlobene ngokuqondile nokuguqulwa komzimba otheksthi. Njengoba ukukhula kwalezi zinsuku kwenzeke ukuze kususwe izithiyo zalo phakathi kwe-dentition yesibili kanye nosuku lokubeletha, lesi sikhathi sizophinde senze imizamo yethu yokuqaphela ukuthuthukiswa kwenkumbulo. Imemori izokwenza, ngale ndlela elandelayo, futhi ngendlela ehlala njalo, inani eliphansi kunelokho okungabe linikeze ukunakekelwa okufanele; ngeke ziphumelele uma ziphuzile.
Amaphutha amaningi angabangela lapha kusuka emikhankasweni ye-rationalist kanye ne-materialist. Uhlelo lwezemfundo oluxhunyaniswe nalo luvame ukufaka ubandlululo ngokulwa nolwazi lokuthi inkumbulo iye yahlanganiswa ngaphandle kosizo lwe-intelligence. Ngeke ayeke ukuphakama ngamandla ukulwa nokuqeqeshwa okukhethekile kwememori, futhi izindlela ezihlakaniphile kakhulu zizoconywa ukuze kugweme ukuthi inkumbulo yale nsizwa ayinayo izinto ezikuyo, ebalekela mhlawumbe ukuqonda kwakhe.
Futhi kubaluleke kangakanani ukuthi sihlanganisa nalesi sikhathi: baqonde! Imfundiso yezinto ezibonakalayo, ukuthembela kuphela ngesizathu, kalula iqinisekisa ukuthi akunakwenzeka ukungena ezintweni ngokwazo, ngaphandle kwemibono engabonakali; ngeke neze avume ukuthi, ngenxa yokuhlakanipha kwezinto, ezinye izici zomphefumulo azibaluleke kakhulu kunesizathu. Akukhona nje ngomqondo wokuthi kulungile ukuthi kunokwenzeka ukuthi ukwazi ukuqonda ngomzwa nangenhliziyo njengesizathu. Ukucabanga yindlela eyodwa kuphela yokuqonda izinto zezwe. Futhi imfundiso yezinto ezibonakalayo yedwa iyibheka njengendlela kuphela. Abantu abaningi abangazikholelwa ukuthi bayakuthanda izinto ezibonakalayo, noma kunjalo bakholelwa ukuthi indlela ewukuphela kokuyiqonda ukuqonda ngesizathu. La madoda angase athi inkolo yokucabanga noma yokomoya. Baye, ngaphandle kokusola, bafaka ukuthanda izinto ezibonakalayo zibe yimicabango yabo siqu, ngoba ukuhlakanipha kungokungabazeki ukuthi isitsha somphefumulo esinikezwe ukuqonda umhlaba wezinto ezibonakalayo.
Ngendaba yezimpande ezijulile kolwazi lomuntu, kubalulekile ukucaphuna lapha inkulumo evela encwadini enhle kakhulu kaJean Paul okukhulunywe ngaye ekuqaleni. Ngokuvamile, lo msebenzi uqukethe ulwazi lwezinga eliphezulu kakhulu emfundweni, futhi kufanele ufunde ngokujulile nokufunda. Ukubaluleka kwalo kumfundisi kunkulu kunamanye emisebenzi ethandwa kakhulu kule nsimu. Nakhu amavesi aphathelene nombuzo wethu: A Ungesabi ubumnyama, ngisho nemisho yonke; umdlalo we-physiognomy yakho kanye ne-accent yakho, umfutho ovulekile womfundi ekuhloliseni ama-enigmas uzosakaza ukukhanya kwesigamu, futhi lokhu, isikhathi esizayo, kuzokwenza kube lula ukukhanya. "
"Isimangalo sakha ezinganeni, njengaseChinese nakubantu bomhlaba, ingxenye yolimi."
“Bheka ukuthi bafunda ukuqonda ulimi kungekudala ukulukhuluma, njengoba kwenzeka kithina ngesiGrikhi noma olunye ulimi lwakwelinye izwe. "
“Bala umsebenzi wesikhathi nemibiko eyembula yezinto. "
Ingane eneminyaka emihlanu iqonda amagama "noma kunjalo," "kahle," "uma," "ngokuphambene nalokho,"
"Impela"; kodwa-ke zama ukucacisa la magama, hhayi kumntwana, kodwa kubaba! Kwigama elilodwa elithi "ngokuqinisekile" kukhona ithuba lesifundo sefilosofi. "
“Uma ulimi oluthuthuke ngokwengeziwe lwengane eneminyaka eyisishiyagalombili luqondwa yingane eneminyaka emithathu ubudala, kungani ufuna ukukhawulela ubuntwana bakho kusukela ebusaneni bayo? Vumela amazwi akho abe yiminyaka embalwa ngaphambi kwesikhathi (ingabe ubuhlakani emisebenzini yabo busandisela amakhulu amaningi eminyaka?) Ngomntwana wezingane ezimbili, kungathi uneminyaka eyisithupha, ngoba umehluko phakathi kweminyaka yobudala linganisa ngokulinganayo ngeminyaka. "
"Umuntu ofundisayo, ovame kakhulu ukuthi uthinte kakhulu othisha inqubekela phambili yengane, akhombise kahle ukuthi ingane isivele ithwele ngokwayo, isilungele futhi yafunda konke, uhhafu wendawo yonke yayo, umhlaba wayo ongokomoya, ngokwesibonelo, ngokwesibonelo, lolu limi, olunikezwe kuphela izimpawu ezibonakalayo, lungakhanyisa izithombe ezingokomoya, kodwa olunamandla okusinika lona. ”
“Injabulo nokuqiniseka kufanele kugcizelele amagama esiwabhekisa ezinganeni; injabulo yabo nokuzethemba kwabo kufanele kusikhuthaze ukwenza njalo. Bangasifundisa ulimi ngenkathi silusebenzisa ukubafundisa; basimangaza ngamagama agqamile kodwa aqondile, njengokuthi, ngokwesibonelo, labo engibazwile besho ezinganeni kusukela eminyakeni emithathu kuye kwemine: Umenzi wamabhodlela (umenzi wamabhodlela); igundane lomoya, lihle ngokwedlula i-bat yethu: ukugunda ukukhanya (ngenxa yezimpukane), njll. ”
Kuyiqiniso ukuthi lesi sici sokubambisana ngaphambi kokuqonda okuqondakalayo kubolekwe kwenye indawo; kodwa lokho uJohn Paul akusho mayelana nolimi kusebenza nasememori. Njengoba nje umzimba ngemilingo wengane assimilates takhi telulwimi ngaphandle kokuba bamsiza olwazini nasekuqondeni imithetho etymology kanye nohlelo lolimi, futhi kuye le nsizwa izoba sihlakulele inkumbulo yakhe ngokusebenzisa izinto ayenazo uzokwazi ukungena kuphela emqondweni oqondakalayo kamuva. Saze ufunde, kamuva, faka kalula kakhulu ukucabanga okunengqondo imiklamo ukuthi, ekuqaleni, abakhethelwa lodwa inkumbulo, kanye, uthatha nemithetho yohlelo lolimi kangcono kusuka olimini esisikhulume kakade. Izinto "ezingenakucatshangwa" zezinkumbulo ziwukucwasa kokuthanda izinto ezibonakalayo kuphela.
Ukuqhubeka njalo kusukela emgomweni ofanayo, le nsizwa izofunda kuphela imithetho ebaluleke kakhulu yokuphindaphinda. Uzosebenzisa izibonelo ezithile, ukuthi ubani ongenza kahle ngaphandle kokubala umshini. Iminwe igcwalisa leli fayela kangcono. Khona-ke uzobe efana netafula lokubuyabuyelela ngokusebenzisa imemori kuphela.
Le nqubo ikhumbula imithetho yokuthuthukiswa kwemvelo yabantu. Ngokuphambene nalokho, kunganakwa ngokubeka ukuhlakanipha okuningi esikhathini lapho ukubunjwa kwememori kungumsebenzi obalulekile. Intelligence iyinhlangano yomphefumulo ozalelwa ekuphileni kwangaphandle kuphela ngokukhulelwa. Ngakho-ke kuyadingeka, ngaphambi kwalesi sizukulwane, ukulondoloza kulo lonke ithonya. Ngakho-ke, le nsizwa kumele iqale ukugubha ngenkumbulo ingcebo ehlanganiswa nomcabango wesintu; Khona-ke kufika isikhathi lapho ukuhlakanipha kuzobamba izinto eziqoqiwe. Ngakho-ke, umuntu akumele aqaphele lokho akuqonde, kodwa kufanele aqonde izinto aziwayo, okungukuthi izinto azithathile ngenkumbulo njengengane yomntwana ulimi olwenziwe.
Futhi lokhu kuyiqiniso kuzo zonke izindawo. Ukufaniswa, ngokukhunjulwa yedwa, kwezehlakalo zomlando, kumele kulandele ukuqonda kwalezi zinto ngosizo lomcabango. Okokuqala, funda kahle
ekukhunjweni izinto zangempela. Bese uhlola imibiko jikelele, njll. Ngomqondo othile, ukunqoba okuhlakaniphile kufanele kudonswe emcebweni ohlanganiswe nenkumbulo. Izinto ezengeziwe ezihlanganiswe yile nsizwa ziyoba zikhulu ngesikhathi lapho isizathu sakhe sizoqhubeka, futhi kuyoba ngcono.
Akudingekile ukuthi ubike ukuthi zonke lezi zizindla zisebenza kuphela eminyakeni yobucayi lapha, hhayi eminyakeni yobudala. Uma kamuva into ethile ifundwa ukubamba noma nganoma yisiphi esinye isizathu, kungenzeka ukuthi inqubo eguqukayo ifanele futhi kufanele ikhethwe; Kodwa-ke, lesi sinyathelo sizobe sincike kakhulu kumthethosisekelo ongokomoya womfundi. Ngesikhathi esikukhathalelayo, noma kunjalo, umuntu akufanele akhiphe ingqondo ngokushaya ucingo oluningi ngokweqile.
Imfundiso esekelwe kuphela ekubonweni kwezinto zokuhlola, uma iqhutshelwa kude kakhulu, ibuye ibe nezinto ezibonakalayo. Zonke izethulo kumele zibuyiselwe engqondweni kulowo nyaka. Isibonelo, akwanele ukuvele nje uhlole futhi uhlole isitshalo, inzalo noma imbali kuphela kusuka endaweni yokubuka. Konke kufanele kube njengophawu emqondweni. Ngempela, imbewu ayiyona nje into esiyibonayo. Kuyo ifakwe, engabonakali, sonke isitshalo esizayo. Ukuthi into efanako impela idlulile lokho okuyizwayo izinzwa: yilokho umbuzo wokubamba, ngendlela ephilayo, ngokuzizwa, ngokucabanga, ngomzwelo. Ukumangalelwa kwemfihlakalo yokuphila kumele kuhlolwe.
Akufanele kunqatshelwe ukuthi inqubo enjalo iphazamisa ukunemba kokubona okubonakalayo. Ngokuphambene nalokho, uma umuntu eqaphela ngokuqinile kule ndlela yokubheka, iqiniso lihlehlisiwe. Ngokweqiniso elibalulekile lezinto zakhiwa ngengqondo nendaba, kanti omunye angacwaninga ngeze indlela ukuthembeka kwesibonakaliso kuzobe kuncishiswe ngayo, lapho ukusebenza kwezinzwa zethu zomzimba kungeziwe emsebenzini wonke. amandla emphefumulo wethu.
Uma amadoda, efana occultist, ungase uqaphele le elonakalisayo umphefumulo nomzimba ngokusebenzisa izimfundiso ezisekelwe nokuphathelene hardware observation, baphoqelela okungenani ngale ndlela. Ngayiphi injongo, ngomqondo eliphakeme, yazi intsha ne infinity amaminerali, izitshalo nezilwane, nazo zonke physics ucwaningo ukuqinisa, uma lezi izimpawu ezibonakalayo azisetshenziswa ngesikhathi esifanayo ukwenza ukusola ozalwa izimfihlo engokomoya?
Konke lokhu, ngokuqinisekile, umoya wokuthanda izinto ezibonakalayo ngeke uphulukise. Umlingo awuyikumangazi. Kodwa uyaqonda nokuthi ukucabanga okungokoqobo kwezemfundo akukwazi ukuqhubeka nokubuka umbono wokuthanda izinto ezibonakalayo. Noma yikuphi umoya osebenzayo lo mfundiso oziqhakazile wona, yilokho okuphambene nakho okuyinto okuzibonakalisa eqinisweni, lapho kungumbuzo wokuya phambili empilweni ngomzwelo okwazi ukwamukela konke izakhi eziqukethe. Ngaphambi kokuyiqiniso kweqiniso, ukuthanda izinto ezibonakalayo kuyinkolelo, futhi lo mdwebi kufanele aveze ngokumangalisayo izitatimende zesayensi engokomoya, ehambisana namaqiniso. Ngokungangabazeki, izithiyo eziningi zizovela ngaphambi kokuba izimiso zalesi sayensi, ezitholakala emphilweni ngokwazo, zivunyelwe ukuba zihlanganyele emfundweni; kodwa lokho kuyimvelo. Okwamanje lezi zinto ziyobonakala zingavamile ezingqondweni eziningi. Kodwa bayongena emkhakheni wekusasa uma beyiqiniso ngempela.
Kubalulekile ukuthi uthisha aqaphele ngokucacile umphumela okhiqizwa kwengane ngezindlela eziqashiwe. Uzokhipha kulokhu kwaziswa ukucabangela okucashile okuzomgqugquzela kuye, esimweni ngasinye, ngezinqubo ezihlobene nomgomo okufanele utholakale. Ngakho-ke kuyadingeka ukwazi ukuthi yimaphi amathonya okuzofanele alalele amakhono amathathu omphefumulo: umcabango, umuzwa nokuthanda. Kubalulekile ukuthi ukuthuthukiswa kwabo kusebenze emzimbeni we-ethekthi, njengoba okwakamuva, phakathi kwe-dentition yesibili kanye nokukhulelwa, kuhamba ngokusiza kwangaphandle, kufinyelele efomini eliphelele nangaphezulu.
Ukuthuthukiswa kwentando enempilo nokuqinela kuncike ekuthomeni kokusebenza okuhle phakathi neminyaka eyisikhombisa yokuqala yemigomo yemfundo ebekwe ngenhla; intando enjalo kumele ithole ukusekelwa kwayo ekuthuthukiseni okugcwele kwamafomu omzimba. Kusukela ku-dentition yesibili, kubalulekile ukuthi umzimba we-etheric ekukhuleni udlulisele emzimbeni womzimba womzimba othile, ngenxa yokuthi lona ungayinikeza uhlobo lwawo oluqinile, ukuqina, ukumelana.
I okuvelayo esiqine ungathola umzimba etheric futhi usizo oluthé xaxa ngenkuthalo ukuze uqinise umzimba wenyama. Futhi pulses ejulile kungenzeka umzimba etheric zibangelwa imizwa nokumela ezenza bayazi umphefumulo ubuhlobo bayo izisekelo asicekeleki wendawo yonke; kuba indima nakho zenkolo.
Intando yomuntu kanye nobuntu bakhe ngeke neze ikhule ngokuvumelana uma, kule nkathi yokuphila, imizwelo ejulile yenkolo ayifakiwe. Inhlangano elinganiselayo yenhloso izofakazela indlela esibheka ngayo indawo yethu ngayinye endaweni yonke. Lapho umuntu engazizwa eboshelwe izibopho ezingenakuguquguquka ezingxenyeni ezingokomoya, intando yakhe kanye nobuntu bakhe ngeke kube namandla, ukuzinza nobunye.
Ukuphila komzwelo kuqhubekela phambili ngokuthanda kwezithombe nezimpawu ezixoxwe ngazo. Izindaba ezibolekwe emlandweni noma eminye imithombo, futhi ngokubhekiselele ekukhunjweni kobuntu, kuzoba nesithakazelo esithile. Ucwaningo oluzama ukuqonda ngokujulile imfihlakalo kanye nobuhle bemvelo kubalulekile ekufundiseni imizwelo. Isiko somqondo wokubukeka, nokuvuswa kwesithakazelo emikhiqizweni yobuciko, kuyoba nengxenye ebalulekile. Umculo kufanele ulethe emzimbeni we-ethekthi ukuthi ishythm, okulandelayo, okuzokwenza kube lula ukuvumelana nesigqi esivele sikhona kuzo zonke izinto. Ukuphila konke kwentsha kuyoba yindlala kakhulu, uma isiko lomqondo womculo kwakungavunyelwe ngaleso sikhathi. Uma le ncazelo yayingekho ngokuphelele, ezinye izici zoMhlaba aziyikuzibonakalisa zona kuye. Lokhu ukukhathazeka kuzodluliselwa kwamanye ubuciko, kuzokhipha yonke imithombo yabo. Uhlelo oluphelele lwezemfundo aluzonaki ukunambitheka kwezakhiwo noma umqondo wokuvumelana kombala. Uzokwenza indawo yokudweba nokudweba, ukuze kuhlolwe amafomu epulasitiki.
Izimo zivame ukunciphisa le mfundiso ibe lula kakhulu; kodwa kungenjalo bangakwazi ukufakazela ukukhishwa kwayo ngokuphelele. Izindlela ezilula ziyoba namandla, uma uthisha enokuqonda okukwazi ukubona umgomo. Injabulo yokuphila, amandla emisebenzini kuthuthukisa bonke abakhona abahlakulele ubuciko nomqondo wobuhle. Futhi i Ubuhlobo phakathi kwala madoda bubukeka ubuhle nobukhulu.
Kuphakathi kweminyaka efanayo ukuthi imizwa yokuziphatha yenziwa ngokuzibopha ezithombeni zokuphila, ngokuzifanekisela eziphathimandla okufanele umuntu alinganise. Kuzoqinisekiswa kukho konke ukugcwala kwayo uma, ngenxa yomqondo wokubukeka, okuhle kubonakalisa ubuhle nokungahambi kahle kuyaphendula umqondo wokubi.
Wacabanga, injalo siqu zokuphila kwangaphakathi ukusebenzisa imibono abstract kufanele ahlale ngemuva ngalesi sikhathi zokuphila. Kumelwe ukuthuthukisa angesabi ngandlela-thile ziyawathinta ithonya angaphandle, kuyilapho izimpawu nemifanekiso zokuphila futhi izimfihlakalo bemvelo ethulwa khona kanye emphefumulweni. Ngakho, phakathi ngomnyaka wesikhombisa futhi eminyakeni yobudala zokuthomba, kufanele ikhule ukucabanga, wangcwatshwa ngaphakathi nezinye nakho komphefumulo. Ngakho ngeke uvuthwe isizathu ingane, ukuze, kamuva, bephumelele lokhu Yiqiniso, kuba sebakwati isahlulelo ngekutimela ubuso izinto empilweni, phambi bolwazi lwabantu. Umzamo omncane ezenziwe ukuthuthukiswa oqondile lokwahlulela, kanye bezokwelapha abanekhono kakhulu ukujabulisa namanye amandla umphefumulo, kuyoba lalibe nesiqalo esihle kakhulu Yiqiniso eminye ukuphila komuntu.
Kodwa isayensi engokomoya inikeza isisekelo esiqinile semfundo engokwenyama kanye nemfundo yomphefumulo. Ukuvocavoca kanye nemidlalo kuzonikeza ukubonakaliswa kobuciko. Njengoba uthando nenjabulo ageze emkhathini eyingane, nalapho umzimba etheric lukhula, esebenzisa umzimba, empeleni nakho kukodwa umuzwa wabo wetuthuko, amandla ayo ikhula njalo. umzimba Gymnastic, isibonelo, kumele imiswe ukuze yonke into, zonke izinyathelo, lowo muzwa umane kubalulekile umphefumulo le nsizwa: "Ngizizwa e ngokwami ​​ibutho ezikhulayo. Futhi lo mzwa kufanele uthuthuke, ukhulise umphefumulo ube ukwandisa okusawoti, kufanele uzizwe njengenhlalakahle.
Kuyiqiniso ukuthi ukucabanga ngemithi yokuzivocavoca ehlangabezana nalomgomo, kuthatha okungaphezu kwezinto ezithinta umzimba nezomzimba womzimba womuntu. Lokhu kudinga ulwazi olujulile, olunembile nolunomusa ngemizwa yenjabulo nokulula okuhambisana nezimo zengqondo nokunyakaza komzimba womuntu. Umhleli walezi zivivinyo kufanele azizwe ngaphakathi kuye imizwa yamandla, injabulo, ukwandiswa okukhiqizwa ukuhamba okunjalo noma isikhundla, noma ukulahlekelwa amandla okushiwo yilolu hlobo olunye.
Ngakho njengoba yokuzijwayeza kanye umzimba kungajayezwa kule umoya, kuthatha selimazi ukuthi uthisha yolahleko isayensi ngokomoya futhi ikakhulukazi isimo esisodwa kwengqondo amaziyo imbangela. ulwazi eqondile nakomoya emihlabeni ayidingekile; umane ufuna ukusebenzisa ekuphileni amaqiniso eyasungulwa isayensi ngokomoya. Uma, ikakhulukazi ezindaweni esisebenzayo ezifana nezemfundo, ulwazi okulumba yasungulwa, sizosheshe ucede zonke izingxoxo engenazithelo ngesidingo ngaphambi ukunikeza ubufakazi la izinkolelo eziqinile. Ukusebenzisa kwabo ayeveza izonikeza ubufakazi obunjengalobo, okwenza imibhikisho enempilo futhi oyingqabavu sokuphila ngokwako. Futhi lapho umbono siye saba ngale ndlela ku ukuhlolwa esiwusizo futhi sicindezelwa ngokuqaphela ukubaluleka yayo, lokhu isiqinisekiso Uvame isisindo hhayi ngaphezu kwabo bonke "ezinengqondo" noma epithet ngokwesayensi? Kuyinto ngezithelo zabo ukuthi siyaqaphela kalula amaqiniso angokomoya. A ukuboniswa, kungakhathaliseki ukuthi "ngokwesayensi" uhlamvu, akukwazi namanje kobuntwana umdlalo logique.A yobudala zokuthomba kuza emzimbeni astral. emaphethelweni wayo isiyatholakala siyohlalisa izakhi zangaphandle ngumnikazi ukuthuthukisa izethulo abstract, ukwahlulela kanye intelligence khulula. Kuze kube yileso sikhathi, thina wathi, la mandla we mphefumulo kumelwe sikhule mahhala kusuka noma iliphi ithonya, kuyilapho imfundo ifeza omunye umsebenzi. Ngokufanayo, emzimbeni kamama, angesabi ukuthuthukisa amehlo nezindlebe.
Ukukhulelwa kwentsha kwathinta esikhathini lapho umuntu, ekhulile ngokwanele, ekwazi ukwahlulela ngokwakhe izinto ayezifunde ngaphambilini. Omunye angalimaza insizwa engaphezu kokuvusa isahlulelo sakhe ngokushesha. Asikwazi ukwahlulela kuze kube yilapho sesihlangene izinto ezihlanganisa, ukufanisa, iziphetho.
Izigwebo ezizimele, ezenziwe ngaphambi kwalesi sikhathi, zizobe zingekho. Lezi amaphutha ezifanayo imfundo ukuthi aveze la mazwibela akuphelele wokuphila, zonke lezi "unokholo" eziyize esekelwe ezinye izinsimbi ulwazi, futhi ngaphandle ukwaziswa okwengeziwe, sengathi ukuba yahlulele nakho kwangaphakathi komphefumulo womuntu oye wakwazi ukulwa nokuvivinya ubudala. Ukuze uthole ilungelo lokucabanga, kumelwe ukuba umuntu ufunde ukuhlonipha imicabango yalabo abasandulele. Akukho mqondo ozwakalayo, uma insimu yayo yomsebenzi ingakalungiswanga yi-faculty yokuzwa ngokuqondile iqiniso, isakhiwo esingenakulinganiswa sokholo egunyeni elibonakalayo elingenakuphikiswa. Uma lesi simiso imfundo kusasebenza, besingayikwahlulelwa encishisiwe ukubona izinsizwa ukulinganisela oluvuthiwe kakhulu umahluleli, ngaleyo ndlela bakwazi ukuphunyula amathonya eziningi zokuphila izenzakalo kuhlanganise emisebeni kuthinte yonke ingqondo unprejudiced.
Noma yimuphi umbono ongenakulungiswa yi-psychic ohambelana nayo uthola inhlanhla emisebenzini yale nsizwa. Ngoba isahlulelo esisodwa esakhelwe sigcina ithonya layo kumlobi walo; umcimbi ugcizelela ngendlela ehlukile lapho uhlangana nombono wangaphambili ngawo. Le nsizwa kumele ifakwe isifiso sokufunda kuqala futhi ihlulele kuphela emva kwalokho. Isizathu kufanele sikhulume kuphela uma zonke ezinye izici zomphefumulo sezikhulumile; ngaphambi kwalesi sikhathi, kufanele kubekwe eceleni kwendima yokukhulumisana. Kumele kusebenze kuphela ukuqonda izinto zezinzwa zethu nokuzibona kwethu, ukuziqoqa kahle, ngaphandle kokuvumela isahlulelo ukuba sibambe ngaphambi kokuba sifinyelele ekuvuthweni kwayo.
Ngakho-ke kuzodingeka ukuthi silondoloze abantu abasha baleli zwe kusuka kuzo zonke izinhlobo zezinkomba futhi bavusa isimo sengqondo somphefumulo lapho, phambi kokuhlangenwe nakho kokuphila, kuzama ngaphezu kwakho konke ukungayifaki. Ngokuqinisekile singamtshela insizwa ngokuthi abanye bacabangani ngalokhu noma lokho; kodwa kufanele kugwenywe ukuthi isiphetho esingapheli sizomenza athathe iqembu. Ngisho nemibono kufanele ithathe isinyathelo ngomzwelo wayo; kufanele akwazi ukuzwa imibono emibili ephikisana ngaphandle kokubiza ngokushesha, ngaphandle kokubheka noma ukuphikisa.
Isimo esifanayo sobusha ngokuqinisekile sidinga othisha nabafundisi bokungacabangi okungapheli. Kodwa labo abaphefumulelwe ngobuqotho besayensi yezomnotho bayothola ukuthi kubanika ngokunembile ukuvumelanisa nezimo ukuthi izindlela zakhe zidinga.
Amaphuzu ambalwa kuphela embonweni yemfundo ngomqondo ongokomoya aqoshiwe namhlanje. Zizokwazi ukukhombisa umsebenzi wezenhlalo ukuthi le ndlela iphakamisa ukufeza. Ukugcwaliseka kwalolu msebenzi kuncike ekusakazweni okubanzi okubanzi kwemibono yesayensi engokomoya. Kodwa ukuze kufinyelelwe kulo mphumela, izimo ezimbili kufanele zihlangabezane.
Okokuqala, kubalulekile ukuthi ubandlululo oluhlangabezana nesayensi engokomoya linyamalale. Labo abayifunda ngokujulile bayokwazi ukuthi akusiyo le nqwaba yezidakamizwa abacabanga ukuthi. Lokhu akusona ukugxeka. Zonke izinhlelo zemfundo nezemfundo ezisesikhathini sethu sithandwa, ekuboneni kuqala, umbono wokuthi labo abahlanganyela esayini engokomoya abaphuphi, abaxosha ama-chimeras. Ukuhlolisisa olukha phezulu okuvimbela yikuphi ukuvivinya ezahlukene njengenhlangano ukungavumelani ezingahlangani kubonakala khona phakathi anthroposophy uzitshela isihloko isayensi ngokomoya, futhi yonke impumelelo yesimanje ukuthi kukhona isisekelo indlela enempilo ekuphileni. Kodwa ukuhlolisisa okujulile kwembula ukuphikisana okukhona ngaphakathi kwemibono yesikhathi sethu, uma nje isisekelo esinikezwa isayensi engokomoya singenalo; ukuzimisela kwabo kubakhokelela ekusekelweni, ngaphandle kwalokho bona ngokwabo abakwazi ukuhlala.
Isibopho sesibili sisekuthuthukiseni kwesayensi ngokomoya. Uma kuzo zonke izinhlangothi izingqungquthela ze-anthroposophical ziye zaqaphela ukuthi, emgqeni wokuqala, ukudweba kusuka ezimfundisweni zethu kube yingxenye ebonakalayo kusukela ekubukeni kwezimo eziningi zokuphila, hhayi nje ukuxoxisana ngesisindo ohlelweni khona-ke umuntu uzobona impilo ngokwayo izinikezela ekuvuthweni kokuzwela ekungeneni kwesayensi engokomoya. Uma kungenjalo, sizoqhubeka sicabangela i-anthroposophy njengobhansela behlelo lekolo elenziwe ngamabonari abodwa, abathandana namafantasti amahle. Kodwa uma ezinikela emisebenzini engokomoya ewusizo futhi ewusizo, leyo minyaka ngeke ihambe ngaphandle kokubona imizwa yokugunyazwa okuhlakaniphile ekhulayo kuyo.
Namuhla, kunabansundu abaningi ejele kunezigqila ngo-1850
I-MOSQUIRIX, I-VACCINE EYEMPAKATHI EMALARIA (MALARIA)